Esi Ejikwa The Speed ​​na VLC Media Player a
Ịchịkwa ọsọ nke gị videos nwere ike ịbụ a na-akụda mmụọ ozi na dị media egwuregwu. Ọ bụrụ na ị bụ onye na nkiri buff ma ọ bụ egwuregwu hụrụ n'anya, ị ga-amasị-ekiri mmasịrị na zuru ezu. Otú ọ dị, ọ bụghị ọ bụla omume na-enye gị ezi ọsọ akara. Dabara nke ọma, na-emeghe isi VLC mgbasa ozi ọkpụkpọ bụ oké software nwere maka ịchịkwa playback ọsọ nke niile video formats. Ịchịkwa ọsọ dịkwa mfe ma na-achọ ole na ole clicks ma ọ bụ keystrokes.
Nkebi nke 1: Olee otú iji VLC mgbasa ozi ọkpụkpọ ịchịkwa ọsọ na windo?
Part 2: Olee ịchịkwa ọsọ-eji VLC on Mac?
Part 3: Iji ngwa Motion hotkey
Dị ka ọ bụ na-emeghe isi software, ị nwere ike ibudata VLC si videolan.org ma ọ bụ site pụrụ ịdabere na isi mmalite dị ka cnet.com ma ọ bụ softonic.com. Download Mac version nke ya. Eso ndị a ịchịkwa ọsọ nke video iji VLC.
1. Ẹkedori na VLC mgbasa ozi ọkpụkpọ na-emeghe video faịlụ site media taabụ ma ọ bụ nanị site abụọ na ịpị faịlụ.
2. Ugbu a gaa playback na ịnyagharịa ọsọ. E nwere ihe anọ nhọrọ ngwa ngwa, ngwa ngwa (ezi), nkịtị ọsọ, iji nwayọọ, na iji nwayọọ (ezi). Họrọ iji nwayọọ na-ma ọ bụ iji nwayọọ ezi ọsọ dị ka gị onwe gị mma.
Ugbu a-egwu video site kpo oku ohere mmanya ma ọ bụ ịpị play button. Ọ na-ewe mere nzọụkwụ abụọ ịchịkwa ọsọ. Jiri ohere nzọụkwụ maliteghachila nkịtị ọsọ ma họrọ nkịtị ọsọ nhọrọ si ọsọ menu.
Ị nwere ike ịchịkwa ọsọ nke gị video playback na VLC. Ọ bụrụ na ị nwere ike ịchịkwa playback ọsọ, ọ pụtara na ị nwere ike ma na-ekiri ndị video na ngwa ngwa ngagharị ma ọ bụ nanị nwere ya egwu ngwa ngwa, dị nnọọ ka gị mkpa.
Saịtị videolan.org bụ isi iyi dị mma maka nbudata na VLC media ọkpụkpọ. Download Mac version nke VLC si website. Otú ọ dị, ị nwekwara ike ibudata site na isi mmalite dị ka download. Cnet.com na softonic.com. Soro ndị na-esonụ ịchịkwa ọsọ nke gị video.
1. Ẹkedori video iji VLC mgbasa ozi ọkpụkpọ ma ọ bụ i nwere ike imeghe si Media menu site na nhọrọ Open File.
2. Ugbu a, ịnyagharịa playback na-emeghe nhọrọ si ọsọ. Ị ga-abụọ mgbanwe nke gbapụrụ ọsọ iji nwayọọ na ngwa ngwa. Jiri onye na-amasị na-egwu video.
Ị nwere ike ịchọta obere nsogbu ọ bụrụ na ị na-egwuri egwu arọ format videos nke nwere file size na GBs. Ị nwere ike kpọọ ya ejikari site na ịga na ọsọ nhọrọ na-ahọpụta ndị nkịtị ọsọ.
Nkebi nke 3: Iji ngwa Motion hotkey
Ọ bụrụ na ị na-achọghị ka ịkwụsịtụ na-aga menus maka slowing na video, i nwere ike iji hotkeys iji nwayọọ na-vidio na ala. Hotkeys enye nnọọ mma akara n'elu ọsọ dị ka o nwere ọtụtụ mgbanwe mgbe ọ na-abịa slowing na ọsọ. Ị nwere ike jiri nwayọọ na video nkịtị 1.0x na dị ka ala dị ka .03x na e nwere ndị 10 ọdịiche na gbapụrụ ọsọ.
Na-eji "[" iji nwayọọ na-na video. Site na ịpị ozugbo ọ ga-gbadaa 0.9x, nke abụọ oge ọ ga-aga 0.8x na na. Iji nweta nkịtị ọsọ dị nnọọ kụrụ "=" na video ga-akpọ na nkịtị ọsọ.
> Resource> VLC> esi Ejikwa The Speed ​​na VLC Media Player